Inkolo njenge-Opium yabantu (Karl Marx)
Inkolo njenge-Opium yabantu
Karl Marx, Inkolo, kunye noQoqosho
Sinokuziphendulela njani ngonqulo-imvelaphi yayo, ukuphuhliswa kwayo, kunye nokuqhubeka kwayo kwintlalo yanamhlanje? Lo ngumbuzo oye wabamba abantu abaninzi kwiindawo ezahlukeneyo ixesha elide. Ngesinye iindawo, iimpendulo zenziwe ngoqobo nje ngokwemfundiso yenkolo kunye nenkolo, ngokucinga inyaniso yeembulelo zobuKristu kunye nokuqhubeka apho.
Kodwa ngekhulu le-18 nele-19, enye indlela "yendalo" yenziwa.
Omnye umntu ozama ukuhlolisisa inkolo kwinjongo, inzululwazi ibona uKarl Marx. Uhlalutyo lukaMarx nokuhlaziywa kwenkolo mhlawumbi enye yezona ziqhankqalazi kwaye zicatshulwa kakhulu yi- theist and atheist . Ngelishwa, uninzi lwabo benza ukucaphuna abaqondi ngokwenene oko uMarx athetha.
Ndicinga ukuba oku, ngenxa yoko, kungenxa yokungaqondi ngokupheleleyo ingcamango kaMarx ngokubanzi kwezoqoqosho kunye noluntu. UMarx empeleni watsho kakhulu inkolo ngokuthe ngqo; kuyo yonke imibhalo yakhe, akalokothi athethe inkolo ngendlela echanekileyo, nangona esichukumisa rhoqo kwiincwadi, iintetho kunye namaphephancwadi. Isizathu kukuba ukugxeka kwakhe inkolo kuyakhela enye ingcamango yembono yakhe yoluntu - Ngako oko, ukuqonda ukucamngca kwakhe inkolo kudinga ukuqonda ukugxeka kwakhe uluntu ngokubanzi.
NgokukaMarx, inkolo ibonakalisa izinto eziphathekayo kunye nokungabi nabulungisa kwezoqoqosho.
Ngako oko, iingxaki zonqulo zigqithiseleyo iingxaki kuluntu. Inkolo ayisona isifo, kodwa yodwa impawu. Isetyenziswe ngabacinezeli ukwenza abantu bazive bebe bhetele malunga nokubandezeleka kwabo ngenxa yokuba bahluphekile kwaye baxhaphazwa. Lo mvelaphi yegama lakhe lokuba inkolo "i-opium yoluntu" - kodwa njengoko uya kubona, iingcamango zakhe zinzima kakhulu kunokuba ziqheleke ngokuqhelekileyo.
Imvelaphi kaKarl Marx kunye ne-Biography
Ukuqonda iingcamango ze- Marx zenkolo kunye neengcamango zezoqoqosho, kubalulekile ukuqonda ngokuthe ngqo ukuba wavela phi, imvelaphi yakhe yefilosofi, nendlela awafika ngayo kwezinye iinkolelo zakhe malunga nenkcubeko kunye noluntu.
Iingcamango zoqoqosho zeKarl Marx
KwiMarx, i-economics yintoni eyenza isiseko sobomi bomntu kunye nokwahlula umlando wabasebenzi, umzabalazo weklasini, kunye nawo onke amaziko oluntu ekufuneka agcine isimo salo . Lawo maziko asekuhlaleni akhiwe kwisiseko sezoqoqosho, ngokuxhomekeka ngokupheleleyo kwizinto eziphathekayo kunye nezoqoqosho kodwa akukho nto. Wonke amaziko avelele kwimpilo yethu yemihla ngemihla - umtshato, icawa, urhulumente, ubugcisa, njl. -nokuqondwa kuphela xa kuhlolwa ngokumalunga nemimoya yezoqoqosho.
Uhlalutyo lukaKarl Marx lweNkolo
NgokukaMarx, inkolo yenye yezo zentlalo zihlala zixhomekeka kwizinto eziphathekayo kunye nezoqoqosho kwiindawo ezinikezelweyo. Akunalo mlando ozimeleyo kodwa kunoko isidalwa somoya ovelisayo. Njengoko uMarx wabhala, "Ihlabathi lonqulo liyinto engumzekelo wehlabathi lokwenene."
Iingxaki eKarl Marx's Analysis of Religion
Njengoko kunomdla kunye nokuqondisisa njengoko uhlalutyo lukaMarx kunye neengcamango zikhona, azikho ngaphandle kweengxaki zabo - ezembali kunye nezomnotho.
Ngenxa yezi ngxaki, akunakufaneleka ukuwamkela iingcamango zikaMarx ngokungabonakaliyo. Nangona ngokuqinisekileyo unezinto ezibalulekileyo zokuthetha ngokuphathelele inkolo yonqulo , akayi kwamkelwa njengegama lokugqibela kulo mbandela.
Biography kaKarl Marx
UKarl Marx wazalwa ngo-Meyi 5, 1818 kwisixeko saseJamani sase-Trier. Intsapho yakhe yayingumYuda kodwa kamva yaguqukela kwiProtestanti ngo-1824 ukwenzela ukuba igweme imithetho ye-semitic kunye noshutshiso. Ngenxa yalesi sizathu, uMarx wenqaba inkolo ekuqaleni kwakhe kwasebuncinaneni waza wenza ukuba kucace ukuba wayengakholelwa kuThixo.
UMarx wafunda ifilosofi eBonn emva koko eBerlin, apho waya khona ngaphantsi kweGeorg Wilhelm Friedrich von Hegel. Ifilosofi kaHegel yayinempembelelo enkulu kwiingcamango zikaMarx nangemibono yecala. UHegel wayengumfilosofi onzima, kodwa kunokwenzeka ukudweba umgca onzima kwiinjongo zethu.
UHegel yinto eyaziwa ngokuba yi-"istististist "- ngokutsho kwakhe, izinto zeengqondo (iingcamango, iingcamango) ziyisiseko kwihlabathi, akukho nto. Izinto eziphathekayo zifana nje neengcamango zengcamango-ngokukodwa, kwi-"Spirit Spirit" okanye "I-Ideal Idea".
UMarx wajoyina "abase-Hegelians abaselula" (kunye noBruno Bauer nabanye) abangazange babe ngabafundi nje, kodwa nabagxeki bakaHegel. Nangona bavuma ukuba ukwahlukana phakathi kwengqondo kunye nombandela kwakuyiyona nkcazelo ebalulekileyo yefilosofi, baxela ukuba kwakuyinto ebalulekileyo kwaye loo mbono yayingumboniso wezinto eziyimfuneko. Le ngcamango yokuba into eyinyani ngokubhekiselele kwihlabathi akuyona ingcamango kunye neengcamango kodwa izinto eziphathekayo yi-anchor eyisiseko apho yonke imibono kaMarx ixhomekeke kuyo.
Iingcamango ezibini ezibalulekileyo ezivelise ibhere ekukhankanyiweyo apha: Okokuqala, ukuba ezoqoqosho ezona zinto ziyimfuneko yokuziphatha kwabantu; kwaye okwesibini, ukuba yonke imbali yomntu yinto yomzabalazo weklastiki phakathi kwabo banezinto kunye nabo bangenazo izinto kodwa kufuneka endaweni yokusebenzela. Lo ngumxholo apho onke amaziko oluntu asekuhlaleni, kuquka inkolo.
Emva kokugqwesa kwiyunivesiti, uMarx wathuthela eBonn, enethemba lokuba nguprofesa, kodwa imigaqo karhulumente yenza uMarx alahle ingcamango yemfundo emva kokuba uLudwig Feuerbach enqatshelwe isihlalo ngo-1832 (kwaye wayengavunyelwe ukubuyela kwi-yunivesithi ngowe-1836. Ngo-1841 urhulumente wayebenqabe uNjingalwazi uBruno Bauer ukuba afundise eBonn.
Ekuqaleni kowe-1842, abantu abahlala eRhineland (eCologne), ababenxibelelana ne-Hegelians yaseLeft, basekela iphepha elichasene noRhulumente wasePrussia, obizwa ngeRheinische Zeitung. UMarx noBruno Bauer bamenywa ukuba babe ngabanikeli abaziintloko, ngo-Oktobha 1842 uMarx waba ngumhleli-oyintloko waza wasuka eBonn waya eCologne. Uhambo lwentlupheko lwaluza kuba ngumsebenzi oyintloko kaMarx ngobomi obuninzi.
Emva kokungaphumeleli kwimiba eyahlukileyo yokuguquka kwilizwekazi, uMarx wanyanzelwa ukuba aye eLondon ngo-1849. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ngobomi bakhe bonke, uMarx akazange asebenze yodwa - uncedo lukaFriedrich Engels owayenalo eyakhe, yavelisa imbono efana neyoqoqosho. Aba babini babefana nengqondo kwaye basebenze kakuhle kakhulu - uMarx wayengumfilosofi ongcono xa u-Engels wayengumkhulumi ococekileyo.
Nangona iimbono kamva zathola igama elithi "Marxism," kufuneka lihlale likhunjulwa ukuba uMarx akazange afike nabo ngokupheleleyo. Ii-Engels zibalulekile kuMarx ngengqondo yezemali - intlupheko yayilinganiselwa kakhulu kuMarx nakwintsapho yakhe; akuzange kube yinto eqhubekayo yokuncedisa ngemali ka-Engels, uMarx akayi kukwazi ukugqiba amaninzi kwimisebenzi yakhe emikhulu kodwa ayenokuphelelwa yindlala nokungondleki.
UMarx wabhala waza wafunda rhoqo, kodwa impilo yokugula yayimthintele ekugqityeni imiqulu emibini yokugqibela yeCandelo-mali (okwenziwa ngu-Engels ngokusuka kumanqaku kaMarx). Umfazi kaMarx wafa ngomhla kaDisemba 2, 1881, kwaye ngoMatshi 14, 1883, uMarx wadlula ngokuthula kwisihlalo sakhe seentonga.
Ulele engcwabeni ecaleni komfazi wakhe e-Highgate Emangcwabeni eLondon.
NgokukaKarl Marx, inkolo injengamanye amaziko asekuhlaleni ekubeni kuxhomekeke kwizinto eziphathekayo kunye nezoqoqosho kwiindawo ezinikezelweyo. Akukho mlando ozimeleyo; Kunoko, sisidalwa semikhosi yokuvelisa. Njengoko uMarx wabhala, "Ihlabathi lonqulo liyinto engumzekelo wehlabathi lokwenene."
NgokukaMarx, inkolo inokuqondwa kuphela ngokumalunga nezinye iinkqubo zentlalo kunye nezakhiwo zoqoqosho kuluntu. Enyanisweni, inkolo ixhomekeka kuphela kwizoqoqosho, akukho nto enye - kangangokuthi imfundiso yenkolo yangempela ayifanelekanga. Oku kukuchazwa komsebenzi wenkolo: ukuqonda inkolo kuxhomekeke kwinjongo yentlalo inqobo isebenza, kungekhona umxholo weenkolelo zayo.
Umbono kaMarx kukuba inkolo yinto engafaniyo eyenza izizathu kunye nezizathu zokugcina uluntu lusebenza ngokufanayo. Njengokuba u-capitalism uthatha umsebenzi wethu osebenzayo kwaye uyasahlukanisa nokubaluleka kwawo, inkolo ithatha iinjongo zethu eziphambili kunye neenjongo zethu kwaye ihlukanise nabo, ibenzela kwi-alien and unknown knitting called god.
UMarx unezizathu ezintathu zokutshatyalaliswa inkolo. Okokuqala, akunangqiqo - inkolo inkohliso kunye nokunqula imbonakalo evimba ukuyiqonda into ebonakalayo. Okwesibini, unqulo luyekisa yonke into ehloniphekileyo ebantwini ngokubanika inkonzo kwaye bayakwazi ukufumana isimo semeko. Kwintetho ebhaliweyo yakhe yokudokotela, uMarx wamukelwa njengesiqubulo sakhe ngamazwi eGrike u-Prometheus owatshutshisa oothixo ukuba avelise umlilo ebantwini: "Ndiyabazonda bonke oothixo," ngokudibanisa ukuba "abazi ophezulu. "
Okwesithathu, unqulo luhanahanisi. Nangona inokuthi imigaqo eyimfuneko, ibambisana nabacinezeli. UYesu wakhuthaza ukunceda abampofu, kodwa ibandla lamaKristu lidibanise nelo lizwe lombutho ophantsi kolawulo lwaseRoma, ukuthatha inxaxheba ekugqibeleni abantu ngeenkulungwane. Ngama-Middle Ages iCawa yamaKatolika yayishumayela ngezulu, kodwa yayifumana ipropati kunye namandla kunokwenzeka.
UMartin Luther washumayela amandla omntu ngamnye ukuba ahumushe iBhayibhile, kodwa wayexhasana nabalawuli abakhulu kunye nabalimi abaye balwa noxinzelelo lwezoqoqosho nezentlalo. NgokukaMarx, le ndlela entsha yobuKristu, iProstestanti, yayiyimveliso yoshishino olutsha njengongxowankulu yokuqala. Izinto ezintsha zezoqoqosho ezifunekayo zifuna isiseko esitsha senkolo esinokuthi silungele kwaye sivikelwe.
Inqaku elidumileyo likaMarx malunga nenkolo livela kwi-critic of Philosophy of Law :
Ukuxinzezeleka kwezenkolo ngexesha elifanayo ukubonakalisa uxinzelelo lwangempela kunye nokuqhankqalaza kokuxinzezeleka kwangempela. Inkolo kukububula kwesidalwa esicinezelekileyo , intliziyo yehlabathi elingenanto engenamdla, njengokuba kungumoya wemoya ongenawo umoya. Kuyi-opium yabantu.
Ukupheliswa kwenkolo njengolonwabo olukhohlisayo lwabantu lufunwa ngenjongo yolonwabo lwangempela. Imfuno yokuyeka ukukhwabanisa malunga nesimo sayo yimiqathango yokuyeka imeko efuna ukucinga.
Oku kudla ngokungaqondakaliyo, mhlawumbi ngenxa yokuba inqaku elipheleleyo lingaqhelekanga lisetyenziswe: i-boldface apha ngasentla yedwa, ibonisa oko kuvame kucatshulwe. Iitaliki zisekuqaleni. Ngandlela-thile, isicatshulwa sinikwa ngokungathembeki ngenxa yokuba "inkolo iyabubula ngesidalwa esicinezelekileyo ..." ishiya into yokuba "yintliziyo yehlabathi elingenangqondo." Oku kubaluleke kakhulu ukuhlaziywa kwabantu kwaye kukuqinisekiswa okukodwa kwenkolo ukuba uzama ukuba yintliziyo yakhe. Naphezu kokungathandi kwakhe kunye nentukuthelo enqulo, uMarx akazange enze inkolo yintshaba eyona nto yabasebenzi kunye nama-communist. Ngaba uMarx wayejonga inkolo njengotshaba olunzulu, wayeza kuchitha ixesha elide.
UMarx uthe inkolo ihlose ukudala iingcamango ezingenangqondo kubantu abahluphekayo. Ubutyebi bezoqoqosho kubathintela ukuba banelisekile ngokwenene kulobu bomi, ngoko unqulo lubaxelela oku kulungile kuba baya kufumana ulonwabo lokwenene kwimpilo elandelayo. UMarx akaphelelanga ngokupheleleyo: abantu banenkxalabo kwaye inkolo inika induduzo, njengokuba abantu abakhubazeke ngokwenyama bafumana ukuxhaswa kwezidakamizwa ezisekelwe opiate.
Ingxaki kukuba i-opiates ayiphumeli ukulimala emzimbeni - uyayikhohlwa nje intlungu kunye nosizi. Oku kuya kulungile, kodwa kuphela xa uzama ukulungisa izizathu eziphambili zentlungu. Ngokufanayo, unqulo aluyikulungisa izizathu ezibangela iintlungu neengxaki zabantu-kunoko, kubancedisa ukulibala ukuba kutheni bahluphekile kwaye kubangele ukuba bajonge phambili kwikamva elicingelayo xa intlungu iphela ngaphandle kokusebenza ukutshintsha iimeko ngoku. Okubi nakakhulu, eli "liyeza" lilawulwa ngabacinezeli abajongene nentlungu kunye nokuhlupheka.
Njengoko kunomdla kunye nokuqondisisa njengoko uhlalutyo lukaMarx kunye neengcamango zikhona, azikho ngaphandle kweengxaki zabo - ezembali kunye nezomnotho. Ngenxa yezi ngxaki, akunakufaneleka ukuwamkela iingcamango zikaMarx ngokungabonakaliyo. Nangona ngokuqinisekileyo enezinto ezibalulekileyo zokuthetha ngoluhlobo lwenkolo , akakwazi ukuwamkelwa njengegama lokugqibela kulo mbandela.
Okokuqala, uMarx akasichitha ixesha elide ekhangele inkolo ngokubanzi; Kunoko, ugxininisa inkolo eyaziwayo: ubuKristu. Amazwi akhe abambelele kwezinye iicawa ezinemfundiso efanayo yonkulunkulu onamandla kwaye uyavuya emva kokufa, azisebenzi kwiinkonzo ezahlukeneyo. Ngokomandulo waseGrisi naseRoma, umzekelo, uvuyo emva kokufa kwagcinwa amaqhawe ngelixa abantu abaqhelekileyo babenokuba nethemba nje kuphela kwisithunzi nje sokuphila kwabo emhlabeni. Mhlawumbi uye wathonyelwa kule ngxaki nguHegel, owayecinga ukuba ubuKristu buyinkolelo ephakamileyo yonqulo kwaye ukuba nayiphi na into eyathethwayo yile nto isetyenziswe ngokuzenzekelayo kwiinkonzo "ezincinci" - kodwa akunjalo.
Ingxaki yesibini ibango lakhe lokuba unqulo lugqitywe ngokupheleleyo ngezinto eziphathekayo kunye nezoqoqosho. Akukhona nje kuphela into ebalulekileyo yokwenza unqulo, kodwa impembelelo ayikwazi ukuqhuba kwelinye icala, ukusuka kwinkolo ukuya kwizinto eziphathekayo kunye nezoqoqosho. Oku akunjalo. Ukuba i-Marx yayilungile, ngoko ubukhulu be-capitalism buya kubonakala kumazwe phambi kobuProtestanti ngenxa yokuba iProtesitanti yinkqubo yonqulo eyenziwe yi-capitalism-kodwa asifumani oku. Ukuguqulwa kweza kufike kwikhulu le-16 leminyaka laseJamani elisoloko lithengeleleneyo; Ubungxowa-mali bokwenene abubonakali kude kube ngekhulu le-19. Oku kubangela ukuba uMax Weber acacise ukuba amaziko enkolo aphelisa ukudala izinto ezintsha zezoqoqosho. Nangona u-Weber ungalunganga, sibona ukuba umntu unokuthetha ngokuchasene noMarx ngobungqina bembali obucacileyo.
Ingxaki yokugqibela iqoqosho ngaphezu kwezenkolo - kodwa ekubeni uMarx wenza i-economics isiseko sayo yonke imicalulo yakhe yoluntu, nayiphi na ingxaki ngokuhlalutya kwakhe kwezoqoqosho kuya kuthintela ezinye iimbono. UMarx ubeka ugxininiso lwakhe kwixabiso lexabiso, eliza kwenziwa kuphela ngumsebenzi wabantu, kungekhona oomatshini. Oku kukho iziphene ezimbini.
Okokuqala, ukuba iMarx ilungile, i-shishini elinamandla kakhulu liza kuvelisa ixabiso elongezelelweyo (kwaye ke inzuzo ngakumbi) kunokuba i-shishini lithembele ngaphantsi komsebenzi wabasebenzi kunye nakwimashishini. Kodwa inyaniso yinto echaseneyo. Kungcono, ukubuya kotyalo-mali kuyafana nokuba umsebenzi uwenziwa ngabantu okanye oomatshini. Ngokuqhelekileyo, oomatshini bavumela inzuzo engaphezulu kunabantu.
Okwesibini, amava aqhelekileyo kukuba ukubaluleka kwezinto ezivelisweyo akukho kubasebenzi abafakwe kulo kodwa ngokulinganisela kokuthengwa komthengi. Umqeshwa unokuthi, uthathe inqaku elincinci lemithi eluhlaza kwaye, emva kweeyure ezininzi, akhiqize umfanekiso owonakalisayo. Ukuba uMarx uchanekile ukuba zonke ixabiso livela kubasebenzi, ngoko umzobo kufuneka ube nexabiso elithe xaxa kuneenkuni eziluhlaza-kodwa oko akunjalo. Izinto zinexabiso kuphela nawuphi na umntu ekugqibeleni uzimisele ukuhlawula; abanye banokuhlawula ngakumbi ngaphezulu kweenkuni eziluhlaza, abanye banokuhlawula ngaphezulu ukutyhila.
Imfundiso ye-Marx yexabiso lomsebenzi kunye neengcamango zokubaluleka kwexabiso njengokwenza ukuqhutyelwa kwezinto zokuqhubela phambili kwi-capitalist yiyona nto ibalulekileyo ekusekelwe kuzo zonke iingcamango zakhe. Ngaphandle kwabo, isikhalazo sakhe sokuziphatha ngokuxhomekeke kwintengxowankulu siyazama kwaye yonke ifilosofi yakhe iqala ukunyuka. Ngaloo ndlela, uhlalutyo lwakhe lwenkolo luba lukhuni ukukhusela okanye ukusebenzisa, ubuncinane ngendlela elula echaza ngayo.
I-Marxists iye yazama ngamandla ukuba aphikise ezo ngxabano okanye abuyekeze iingcamango zikaMarx ukuba zixhobise kwiingxaki ezichazwe ngasentla, kodwa abazange baphumelele ngokupheleleyo (nangona ngokuqinisekileyo abavumelaniyo - mhlawumbi abayi kuba ngabaMarxists. ukuza kwi-forum kwaye unikeze izisombululo zabo).
Ngethamsanqa, asinakupheleliswa ngokupheleleyo kwiifom zeMarx ezilula. Akunakufuneka sizenzele ingqalelo kwiingcamango yokuba inkolo ixhomeke kuphela kwizoqoqosho kwaye akukho nto enye, njengokuba iinjongo zeenkolo zangempela ziphantse zingenanto. Kunoko, sinokuqonda ukuba kukho iintlobo zentlalo yeempembelelo kwizenkolo, kubandakanywa nezoqoqosho kunye nezinto eziphathekayo kuluntu. Ngomqondiso ofanayo, unqulo lunokuthi lube nempembelelo kwinkqubo yezoqoqosho yoluntu.
Ingaba kukho isigqibo sokugqibela malunga nokuchaneka okanye ukuqinisekiswa kweengcamango zikaMarx ngonqulo, simele siqaphele ukuba unikeze inkonzo enenzuzo ngokunyanzelisa abantu ukuba bajonge ngokubhekisele kwiwebhu yentlalo apho inkolo ihlala ihlala khona. Ngenxa yomsebenzi wakhe, akunakwenzeka ukufundisisa inkolo ngaphandle kokuhlolisisa ubudlelwane bayo kwiintlobo ezahlukeneyo zentlalo nezoqoqosho. Ubomi bomoya bobomi bangeke besacingelwa ukuba bazimelele ngokupheleleyo kwizinto zabo zokuphila.
UKarl Marx , isiseko esinqununu sokwenza imbali yoluntu kuqoqosho. Ngokutsho kwakhe, abantu-kwaneziqalo zabo zokuqala-abaxhaswa yimibono ephakamileyo kodwa endaweni yokukhathazeka ngezinto eziphathekayo, njengento yokutya kunye nokuphila. Esi siyisiseko esisisiseko sombono wezinto ezibonakalayo kwimbali. Ekuqaleni, abantu basebenza ngokubumbene kwaye kwakungekho kubi.
Kodwa ekugqibeleni, abantu bahlakulele ezolimo kunye neengcinga zomhlaba wabucala. Ezi zinto zibini zadala ulwahlulo lwabasebenzi kunye nokwahlukana kweeklasi ezisekelwe kumandla kunye nobutyebi. Oku, kwakhona, kwakha ingxabano yentlalo eqhuba uluntu.
Zonke ezi zenziwe zibi kakhulu nge-capitalist ezenza kuphela ukungafani phakathi kweeklasi ezizityebi kunye neeklasi zabasebenzi. Ukungqubana phakathi kwabo akunakunqandwa ngenxa yokuba ezo zifundo ziqhutyelwa yimpembelelo yamandulo ngaphezu kolawulo lomntu. Ubuncwane bobuhlanga budala enye intlungu entsha: ukusetyenziswa kakubi kwexabiso eliseleyo.
I-Marx, inkqubo efanelekileyo yezoqoqosho izakuquka ukutshintshana kwexabiso elilinganayo lexabiso elilinganayo, apho ixabiso lichongwa ngokubaluleka komsebenzi obekwe kuyo yonke into eyenziwa. Ubuncwane bobuhlanga buphazamisa le ngqungquthela ngokuzisa isiseniso senzuzo-umnqweno wokuvelisa ukungatshintshaniswa kokungatshintshi kwexabiso elincinci lexabiso elixabisekileyo. Ingeniso ekugqibeleni ivela kwixabiso eliseleyo eliveliswe ngabasebenzi kwimveliso.
Umqeshwa unokuvelisa ixabiso elaneleyo lokutya intsapho yakhe kwieyure ezimbini zomsebenzi, kodwa uhlala emsebenzini ukuze ube ngumhla opheleleyo - ngexesha likaMarx, elinokuba ngama-12 okanye ama-14 iiyure. Lezo iiyure ezongezelelweyo zibonisa ixabiso elithengiswa ngumsebenzi. Umnini wefektri akenzanga nto ukuze azuze oku, kodwa uyayisebenzisa kodwa ugcina umehluko njengenzuzo.
Kulo mongo, ngokobuKomanisi unenjongo ezimbini: Okokuqala kufuneka ukuchazela ezi zinto kubantu abangaziqondi; Okwesibini, kufuneka ukuba ubize abantu kwiiklasi zabasebenzi ukuba balungiselele ukulwa nokuguqulwa. Oku kugxininiswa kwisenzo kunokuba nje ukuxubusha kwefilosofi kubaluleke kakhulu kwinkqubo kaMarx. Njengoko wabhala kwiiThee zakhe ezidumileyo kwiFeererbach: "Iingcali zefilosofi zichaza kuphela ihlabathi, ngeendlela ezahlukeneyo; , kodwa ke, ukuguqula. "
Uqoqosho, ngoko ke, luyintoni isiseko sobomi bomntu kunye neembali-ezahlukanayo zabasebenzi, umzabalazo weklasini kunye nawo onke amaziko asekuhlaleni okumele agcine isimo salo. Lawo maziko asekuhlaleni akhiwe kwisiseko sezoqoqosho, ngokuxhomekeka ngokupheleleyo kwizinto eziphathekayo kunye nezoqoqosho kodwa akukho nto. Wonke amaziko avelele kwimpilo yethu yemihla ngemihla - umtshato, icawa, urhulumente, ubugcisa, njl. -nokuqondwa kuphela xa kuhlolwa ngokumalunga nemimoya yezoqoqosho.
UMarx unegama elikhethekileyo kulo lonke umsebenzi oya kuphuhlisa loo maziko: ingcamango. Abantu abasebenza kulezo zixhobo - ukuphuhlisa ubugcisa, i- theology , ifilosofi, njl. -cinga ukuba iingcamango zabo zivela kwiminqweno yokufezekisa inyaniso okanye ubuhle, kodwa ekugqibeleni akunjalo.
Enyanisweni, zibonakaliso zenzalo yeklastiki kunye nempikiswano yeklasi. Ziyinkcazo yesidingo esingaphantsi kokugcina isimo se-quo kunye nokugcina izinto zangoku ezoqoqosho. Oku akumangalisi - abo basemagunyeni baye bafuna ukulungelelanisa nokugcina loo magunya.
Ngaba izazi zeenkwenkwezi ziyiNzululwazi?
Ngaba uTro Cruise yayidla i-Placenta kaKathy Holmes?
Ngaba Abantu Abakholelwa KuThixo Bamele Baphendule Njani Xa Abanye Babuza Imithandazo?
CS Lewis Vs. Ukukholelwa kuThixo kunye no-Atheists
Yintoni i-Logical Positivism? Imbali yePositive Positivism, iiPositive Positivists
Inkolo 101: Ukuhlola uhlobo lweNkolo kunye neenkolelo zonqulo
Kuthekani ukuba ngaba abantu abangaboniyo bayalunganga? Ngaba Awusabi Ihero? Ngaba Unokuthatha I-Chance?
10 Ukunwabeleka Ngomdlali Wophakamileyo uHenry Cavill
Iincwadi eziphezulu zeBantwana
Iintlobo ezahlukeneyo ze-ATV 4-iivili
12 Eyona mininzi Imincili yamaPhasika e-Batman v Superman: Usuku lwezoBulungisa
Biography kaSteven Seagal
Indlela yokubuyisela kwakhona umbane wakho womoya
Iikholeji zeeKholeji kunye neeNkcazo zeAgasti
Iprogramde ye-Emerald Geode Crystal Project
Amaphunga aphezulu aphezulu kaMonica
UBenjamin Tucker Tanner
Isithethe kwiMaya Angeloou "Caged Bird"
Iintetho ezili-10 eziphezulu ze "Iingelosi esizivelele phezulu" ngamaKristu kunye neVangeli
Inkcazo yoHlahlo lwabiwo-mali
5 Easy Decorations Samhain
I-System Central yeNervous System
Funda Ukufumana Iikhokiti kwi-"Jimmy Kimmel Live" Show
Ukuthelekisa nokwahlukana kwamaLungelo eMzilwanyana kunye neeMpawu zokuSingqongileyo